Soterre yeQlik Sense - Motio
musha 9 Products 9 Soterre 9 Soterre yeQlik Sense
Soterre yeQlik Sense SaaS ichangotangwa! Tenga kunyorera kwako nhasi uye ugamuchire vhezheni kutonga kwemahara kusvika kuburitswa kunotevera!
Inoenderana Nyaya Dzidzo
Akarurama analytics akakosha mukugonesa timu yako kuita zvakakodzera bhizinesi sarudzo. Qlik inogonesa idzi sarudzo nekushandura yako data kuita inoitika inoitika. Soterre inoongorora shanduko yemidziyo yako yeQlik, ichigonesa chiitiko chakachengeteka uye chakanyanya.
Kunyangwe iwe uri On-Premise kana SaaS, Soterre wakafukidza here! Kufarira demo re Soterre?
Soterre inopa timu yako ruzivo rwakawanda muQlik Sense. Svinura kugona kwako uchiziva kuti unogona kugadzirisa chero shanduko, chero nguva. Soterre yeQlik inopa zero-yekubata vhezheni yekudzora uye nyore kutumirwa kweako Qlik kunyorera, machira, hova, kuwedzeredzwa, uye zvimwe! Uye zvakare, inobvumira:
ZYakavakirwa-mukati shanduko danda
Verenga nyaya yekudzidza kuti udzidze kuti vatengi vedu vakawana sei kubudirira ne Motio!
Baker Tilly Anovimba Soterre ne Audits
Yemari Femu Yakavakirwa paTrust Baker Tilly inotungamira yezano, mutero, uye vimbiso yakasimba yakatsaurirwa kuvaka hukama hunogara kwenguva refu nevatengi vayo. Chinangwa chayo ndechekuchengetedza kukosha kwayo kwevatengi munyika inogara ichichinja. Iyo kambani inosimbisa kuvaka chivimbo ...
Soterre Inonatsiridza Kuonekwa uye Hunhu muQlik Sense
VTCT iQlik Data Intensive Company Vocational Training Charitable Trust (VTCT) inyanzvi inopa sangano inopa hunyanzvi hwekuita basa nehunyanzvi munzvimbo dzakasiyana dzebasa. Zvinangwa zvaro ndezve kufambira mberi kwedzidzo, kutsvagisa, uye ...
Risk Administration Services Inoita Inokurumidza Dhata Kuendesa uye Rusununguko Kugadzira
Chiono Chekukura Njodzi Yehutongi Hwevhisi ikambani inokurumidza kukura 'inishuwarenzi kambani inoshandira kumusoro kwepakati kumadokero, mabani makuru, uye madokero matunhu eUS Nekuitwa kweQlik Sense kuRAS, madhipatimendi mukambani yese ...
Unoda yemahara plugin inokupa iwe vhezheni kutonga mubrowser yako? Dzvanya pano.